Ikhabhathi epholileyo yaseCreekside - I-Airbnb
Ikhabhathi epholileyo yaseCreekside
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguBeth
Ikhabhathi efihlakeleyo kwiintaba ezibekwe kumbindi wezinto ezininzi kunye nezinto ezinomtsalane kwicala elingasezantsi leNtaba yeSmoky Nat'l Park ecaleni komlanjana. Yabucala kakhulu; Amagumbi amabini okulala, ibhafu enye epheleleyo kunye nekhitshi eligcweleyo elinezixhobo zombane. Indawo enkulu, entle elawulwa kude elawulwa yigesi / indawo encinci yokwahlula ubushushu nomoya. Indawo enkulu engaphandle enemigangatho emininzi enabantu abane tub eshushu, ipropane grill kunye nendawo yomlilo.
Ikhabhinethi izimele kakhulu kwaye akukho bamelwane kufutshane. Ungawuva umlambo ubaleka ecaleni kwekhabhinethi kwaye kukho iimbono ezintle zoluhlu olufutshane lweentaba ezijikelezileyo ukusuka kwimigangatho emibini yomgangatho. Yeyona ndawo ifanelekileyo yokubaleka kubuphithiphithi bobomi bemihla ngemihla; kodwa inazo zonke izibonelelo ozidingayo ukuze uhlale uqhagamshelwe. Indawo eshushu yeVerizon ye-wifi kunye nefowuni yendlu; ufumana umqondiso weseli elungileyo kakhulu ukuba unefowuni Verizon. Kukwakho nenethwekhi yesitya enamatshaneli bhanyabhanya amaninzi kunye nokhetho lokubukela. Ikhabhathi inomgangatho ukuya kwiifestile zesilingi ecaleni kwendawo yomlilo yamatye evumela ukukhanya kunye nemibono emihle. Indlela engaphakathi inegrabile enethambeka ethe gqolo kodwa akukho kuhla okanye umva kwaye ihlala malunga ne-1/4 yeekhilomitha ukusuka kwindlela ethe tyaba ethe tyaba. Isembindini kwizinto ezininzi ezinomtsalane kule ndawo,
4.90 · Izimvo eziyi-209
Ndihlala eSaint Augustine Florida ixesha elizeleyo...kodwa ndihlala ndifumaneka ukuba iindwendwe zam zidinga nantoni na. Ndinabasebenzi bendawo abalungileyo kakhulu bogcino lwendlu/ukugcinwa kwebhafu eshushu/ ukontraka jikelele/ukulungisa umhlaba.
Ndihlala eSaint Augustine Florida ixesha elizeleyo...kodwa ndihlala ndifumaneka ukuba iindwendwe zam zidinga nantoni na. Ndinabasebenzi bendawo abalungileyo kakhulu bogcino lwendlu…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Robbinsville